Printsy ao Zeorzia Miomana Handray Fanjakana Eo Amin’ny Faha-Dimin’ny Taonany · Global Voices teny Malagasy
Printsy ao Zeorzia Miomana Handray Fanjakana Eo Amin'ny Faha-Dimin'ny Taonany
Voadika ny 26 Avrily 2017 15:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, हिन्दी, русский, English
Mpandova ny Seza Fiandrianana ao Zeorzia, ny Printsy Giorgi Bagration Bagrationi Mukhranbatonishvili (ankavia) sy ny rainy, Lohan'ny Tranom-Panjakàna ao Zeorzia, ny Printsy Davit Bagration-Mukhranbatoni, mitafy ny chokahs; akanjo nentindrazana Zeorziana. (Sary: Ny Tranom-Panjakàna ao Zeorzia)
Ity manaraka ity dia lahatsoratra mpiaramiasa avy amin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Tamar Kikacheishvili. Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Toy ireo ray aman-dreny maro be fitiavana, mandefa sariny mahafatifaty ao amin'ny Facebook i Giorgi, dimy taona, mitsoka labozia eo ambony mofomamy fankalazàna tsingerintaona, na manao solomaso mena fitondra amin'ny masoandro eo aorian'ny familiana fiara, mba hoe mitondra, hono, izany.
Saingy manohitra izay fisehoana manetry tena izay ireo fanehoankevitra eo ambanin'ireo sary. “Ho ela velona ny mpanjaka!” hoy ny soratan'ny maro. “Na ireo hodimasony aza toy ny an'ny Mpanjakavavy Tamar,” hoy ny nosoratan'ny mpankafy iray, nilaza ilay mpanjakavavy nanjaka tany amin'ny taonjato faha-12 sy faha-13, ary raha ny marina dia razamben'i Giorgi lavitra tokoa.
Maniry ny ho ao anatin'i Eoropa i Zeorzia, ary ho an'ny governemantany dia midika demaokrasia amin'ny fomban'ny Fiombonambe Eoropeana izany. Saingy misy vitsy an'isa amin'ireo Zeorziana no maniry ny firenen'izy ireo hanaraka ny fombandrazana fanaon'ilay Eoropa fahiny amin'ny famerenana ny fitondram-mpanjaka efa naharitra an'arivo taonany tao amin'ny firenen-dry zareo. Ary mipetraka eo amin'ireo soroka kelin'i Gorgi ny fanantenan-dry zareo – na, satria ny pejiny Facebook manondro azy ho Mpandova Fiandrianana ao Zeorzia, Mpandova ny Printsy Giorgi Bagration Bagrationi Mukhranbatonishvili.
Amin'ny ankapobeny dia noho ny Patriarka IIia II, mpitarika ny Fiangonana Ortodoksa Zeorziana, no tena nahazoan'ny Printsy Giorgi izay toerany izay, ny patriarka izay tamin'ny 2007 niantso an'i Zeorzia hisafidy fitondram-panjaka iray manaraka lalàm-panorenana. Tamin'izany fotoana izany, anefa, nisy vato nisakana: tsy nisy mpandova mazava. “Tokony hofidiana avy any anatin'ny fianakavian'ny mpanjaka ireo kandidà handray ny satro-boninahitra, ary efa hatrany amin'ny fahazazàny izy no atsangana ho mpanjaka,” hoy i Ilia tamin'izay fotoana izay.
Nifehy an'i Zeorzia ny fianakavian'ny mpanjaka Bagrationi nanomboka tamin'ny taonjato faha-10 hatramin'ny faha-19, fony i Rosia nanjanaka an'i Zeorzia ary nandrava ny fitondram-panjaka. Voatelina ho isan'ny razana Rosiana ambony ny Bagrationis tamin'izay. Niparitaka tany Eoropa ny ankamaroany taorian'ny Revolisiona Rosiana sy ny fametrahana ny Firaisana Sovietika, saingy nanomboka niverina ny sasany rehefa tafaverina ny fahaleovantenan'i Zeorzia tamin'ny 1991, ary nanomboka azo noeritreretina ny famerenana indray ny fanjakam-panjaka, na dia tsy mbola azo ekena aza.
Zanaky ny iray amin'ireo Bagrationis nijanona tao Zeorzia ny Printsy Nugzar Bagrationi Gruzinski, poety mpanohitra, ary taranaka mivantana avy amin'ilay mpanjaka farany tao Zeorzia. Saingy efa nanambady i Anna, zanaka vavin'ny Printsy Nugzar – nanambady olona ivelan'ny fianakaviana Bagrationi – ary niteraka vavy anankiroa. Araka ny nfandehany, anefa, dia nisara-bady izy tamin'ny 2007, ary i napetrak'i Ilia tany amin'i Davit Bagrationi-Mukhraneli., mpiray tampo lavitra, manana fiaviana Espaniola izy.
Tsy mbola nifankahafantatra izy roa talohan'ny nikarakaran'ilay patriarka ny mariazin'izy ireo, hoy i Mamuka Bagrationi, havana lavitr'i Giorgi sady vahinin'ny fandaharana anaty fahitalavitra momba ireo olana mifandraika amin'ny fianakavian'ny mpanjaka. “Zavatra tena mahazatra ao anatin'ny fianakaviamben'ny mpanjaka io manao sorona ny fiainan-dry zareo manokana io mba ho tombontsoan'ny firenena,” hoy i Bagrationi tao anaty tafa iray ho an'ny EurasiaNet.org.
Lasa mpivady ny roa tonta taorian'ny lanonana fampakarana natao tao amin'ny Katedrly Trinite Masina tao Tbilisi, tamin'ny 2009, natrehan'ireo olona 3.000 nasaina, saingy tsy naharitra ela ilay tokantrano; nisaraka tamin'ny 2013 ireto mpivady.
Tamin'izany fotoana, anefa, niteraka an'i Giorgi ry zareo. Tamin'ny 2011 izy no teraka ary ilay patriarka ihany no nanao batisa azy tao amin'ny Katedralin'i Svetitskhoveli ao Mtskheta, toerana efa fanosorana ireo mpanjaka Zeorziana hatry ny fahagola. Mpandraharaha sangany sy mpikatroka tsy tia pelaka ary mpanohitra ny liberaly ny iray amin'ireo dadabeny, Levan Vasadze.
“Fotoana lehibe tokoa ny hoe taorian'ny roanjato taona dia nisy zaza iray nohosorana ho mpanjakan'i Zeorzia,” hoy i Ilia .
Zara raha misy resaka ety anaty pejy Facebook-n'ny fianakavian'ny mpanjaka ny fiainan'i Giorgi. Taorian'ny nisarahany tamin'ny vadiny, miaina miaraka amin'ny reniny i Giorgi, ao amin'ny trano iray ao Tbilisi. Saingy mbola mijanona ho mavitrika amin'ny fanabeazana azy ny rainy; iray amin'ireo hetsika irahan'ny ray sy ny zanaka manao ary tena ankafizin'izy ireo ny mijery hazakazaka fiarakodia ao amin'ny toeram-pilalaovana ao Rustavi, tanàna iray ao atsinanan'i Tbilisi, hoy i Bagrationi.
Mampiseho ny fanabeazana tsy manam-paharoa azony ny sasany amin'ireo sarin'i Giorgi ao amin'ny Facebook. Matetika mitafy ny chokha nentindrazan'ny Zeorziana izy, ary mazàna no azo sary miaraka amin'ny patriarka.
Efa miteny ny fiteny Zeorziana, Rosiana ary Espaniola sahady ny Printsy, ary raha mbola iadian'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana hevitra ny momba ny fanabeazana homena azy, hifantoka amin'ny fotokevitra mendrika ho anà mpanjaka, toy ny fianarana politika sy ny ara-tafika izany, hoy i Bagrationi.
Tsy ho ela izy dia hanomboka hianatra ny khridoli, haiady nentindrazan'ireo Zeorziana izay nanomboka nifoha indray ao amin'ny firenena. “Mitaiza fahaizamanao isankarazany izy io, toy ny fifantohan-tsaina, ny fandanjalanjàna ary ny faharetana,” hoy i Bagrationi.
Raha mbola matroka ny fanantenantsika momba ny famerenana ny fitondram-panjaka, mbola malaza eny amin'ny olona ilay izy, farafaharatsiny amin'ny teoria. Nampanao tsapa hevitra, tamin'ny Jolay 2015, ny ivontoerana fikarohana Doctrina ao Tbilisi : tamin'ireo Zeorziana 560 nanaovana fanadihadiana, manodidina ny 30 isanjato no nankasitraka ny famerenana ny fitondram-panjaka.
Kanefa, eo amin'ny fampiharana, tsy dia nahazo vàhana loatra ilay fotokevitra hamerina ny fitondram-panjaka. Tsy vitan'ilay antoko politika , Royal Crown, nanosika ny hiverenana amin'ny fitondram-panjaka, ny nampitsimbadika ny tantana tamin'ireo fifidianana parlemantera tamin'ny taona lasa. Antitra ny antoko raha miohatra amin'ny printsy, saingy niteny i Vazha Abashidze, mpitarika azy, fa manohana an'i Giorgi amin'ny fitakiana ny seza fiandrianana.
“Zaza izy, saingy afaka mahita aho hoe zaza mahavariana izy, izay tsy manan-tahotra sy malala-tsaina, ary ho tian'ny vahoaka,” hoy i Abashidze tamin'ny EurasiaNet. “Ny patriark'i Weorwia no mpiambina antsika ankehitriny, saingy mazava ho azy fa mikarakara misimisy kokoa an'ireo Kristiana Ortodoksa izy. Tia ny olona rehetra ny mpanjaka, tsy ijereny izay finoana arahany.”
Nomarihan'i Abashidze fa tsy nisy na iray aza olona naminavina mialoha ny ho faharavàn'ny Firaisana Sovietika, araka izany dia fiovàna iray goavana hafa teo amin'ny hoavin'ny firenena no mety hitranga haingana kokoa noho izay nandrasan'ireo Zeorziana. “io no sitrapon'Andriamanitra ary tsy haintsika hoe rahoviana izany no hiseho, saingy tsy maintsy hiseho,” hoy izy. “Ilaintsika ny mivonona ho amin'ny fotoana mahamety azy, ary izany no antony ilantsika ny fanànana olona tsara fiomanana handova ny seza fiandrianana.”